जलेका बालकलाई मन्त्री बिष्ट सहितको आर्थिक सहयोग कसले कती दिए? (विवरण सहित) – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/जलेका बालकलाई मन्त्री बिष्ट सहितको आर्थिक सहयोग कसले कती दिए? (विवरण सहित)
जलेका बालकलाई मन्त्री बिष्ट सहितको आर्थिक सहयोग कसले कती दिए? (विवरण सहित)
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ श्रावण ३०, बुधबार १५:१७ मा प्रकाशित
गुल्मी, ३० साउन । आगोले जलेका इसमा गाउँपालिका ३ ठुलाचौरका ४ बर्षिय उमेश कुमालको स्वास्थ्योपचारका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले नगद १५ हजार सहयोग गरेका छन् । उनले बालकको घटनाले आफुलाई स्तब्ध बनाएको बताउँदै मन्त्री बिष्टले उनको बाँकी उपचारको लागि पनि अस्पतालसंग समन्वय र सहकार्य भैरहेको बताए । मन्त्री बिष्टले पठाएको सहयोग रकम नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका सचिव तथा नयाँ पत्रिकाकर्मी टोपलाल अर्यालले जिल्ला अस्पताल तम्घासका डाक्टर सुरेन्द्र रायमाझीलाई हस्तान्तरण गरे ।
आर्थिक अभावको कारण बालकको उपचारमा समस्या भएको खबर विभिन्न मिडियामा प्रकाशित भएपछि सहयोग संकलन हुने क्रम चलिरहेको छ । बालकको उपचारको लागि इस्मा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीले समेत आर्थिक सहयोग गरेका छन् । इस्मा गाउँपालिकाका उापध्यक्ष बिमला खत्रीको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले नगद १५ हजार पाँच सय सहयोग गरेका छन् । जसमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बिष्टबाट नगद एक हजार, उपाध्यक्ष बिमला खत्रीबाट नगद तीन हजार, वडा नं ३ वडाअध्यक्ष तोयनाथ शर्मा सापकोटाबाट नगद एक हजार आर्थिक सहयोग भएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाका सुचना प्रविधी अधिकृत बाबुलाल थापाबाट नगद १५ सय, स्रोत व्यत्ति लाल बहादुर कुंवरबाट एक हजार, इन्जिनियर बाबुराम ज्ञवालीबाट नगद एक हजार, वास अधिकृत हरि प्रसाद घिमिरेबाट नगद एक हजार, नासु नारायण महतबाट नगद एक हजार, सव इन्जिनियर रविन घर्तिबाट नगद १५ सय, सचिव जयपाल विकबाट नगद एक हजार, अस्मिता लम्सालबाट नगद पाँच सय, स्वास्थ्य सहसंयोजक गोकर्ण थापाबाट नगद एक हजार, अशोक केशीबाट एक हजार आर्थिक सहयोग भएको छ ।
त्यस्तै पत्रकार महासंघ गुल्मीका सचिव टोपलाल अर्यालबाट नगद दुई हजार र गण्डकी इग्लिस बोर्डिङ्ग स्कुलका भाईस प्रिन्सीपल सुनिल बस्नेतबाट नगद २५ सय आर्थिक सहयोग भएको छ । संकलित रकम जिल्ला अस्पतालका डाक्टर सुरेन्द्र रायमाझीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । संकलित रकम बुझ्दै रायमाझीले छिटो भन्दा छिटो बालकसम्म रकम पुराउने बताए । गत साउन ८ गते अगेनामा पकाई राखेको दालमा खसेका उनको ३० प्रतिशत शरिर जलेको छ ।
आर्थिक अभावको कारण बालकको अस्पतालका स्टाफहरुले चन्दा संकलन गरेर उपचार गरिरहेका थिए । उनको अवस्था खतरामुक्त नभएको र जिल्ला अस्पताल तम्घासमा आईसियु कक्ष नभएको कारण पाल्पा मिसन अस्पताल रेफर गरिएको छ । अहिलेसम्म आर्थिक अवस्था अत्यन्तै न्यून भएकाले आयुसियुको सट्टा ‘सेकेन्ड डिग्री वान’ कक्षमा २० दिन सम्म राखेर उपचार गरिरहेको जिल्ला अस्पतल तम्घासका डाक्टर सुरेन्द्र रायमाझीको भनाई छ ।
बालक बचाउन अस्पतालको पुरै टिमले चन्दा संकलन गरेर उपचार गरिरहेको भएपनि खाना खुवाउन समस्या छ । जसका कारण बालकको शरिरमा रगत मात्रा कम भैरहेको डाक्टर रायमाझीले बताए । ‘पाइप मार्फत खाना खुवाएका छौ, बच्चा पीडाले छटपटाउँदा पाइप फाल्छ,’ डाक्टर रायमाझीले भने, ‘खाना नै नखाएपछि कसरी छिटो निको हुन्छ ।’ उनले अस्पतालमै नि:शुल्क पाइने बाहेक बाहिरबाट ल्याउने औषधीका लागि डाक्टर सुवोध ज्ञवालीको नेतृत्वमा सबै स्टाफहरुले दुई दुई सयका दरले चन्दा उठाएको बताए ।